UChristie Agatha. Olona tshintsho ludumileyo kwifilimu | Uncwadi lwangoku
UChristie Agatha. Olwakhe uhlengahlengiso oludumileyo lwefilimu
Inguqulelo entsha yefilimu ye- Ukubulala kwi-Express Express, Enye yeenoveli ezidumileyo Agatha Christie. Ekhokelwe kunye neenkwenkwezi zaseBritane UKenneth brannagh, eligcina indima ye Hercule Poirot, Idibanisa isamente ebutofotofo, njengaleyo USidney Lumet Ngowe-1974. Ndiphonononga ezinye zezona zaziwayo. Ngokwam ndiya kuhlala ndihleli kunye nobugcisa Ingqina lokutshutshiswa.
1 UKUBULALA KWINKCUKACHA YANGAPHAMBILI (SIDNEY LUMET, 1974)
2 UKUFA KWI-NILE (JOHN GUILLERMIN, 1978)
3 Isipili esaphukileyo (UGUY HAMILTON, ngo-1980)
4 UKUFA PHANTSI KWELANGA (GUY HAMILTON, 1982)
5 UQEQESHO NGO-4: 50 (UGEORGE POLLOCK, 1961)
6 ISHUMI NEGRITOS (RENÉ CLAIR, 1945)
7 INGQINA LENDAWO (BILLY WILDER, 1957)
BULALA KWINKCAZO YANGAPHAMBILI (SIDNEY LUMET, 1974)
Yayiyinguqulelo yokuqala kwaye umlawuli wayesazi ukuba angayijika njani inoveli kaChristie eyonwabisayo iklasikhi umbulelo kwangoko, ngokuyinxenye, kwi uphose obalaseleyo phakathi kwabo kwakukho iBritani UAlbert Finney njengePoirot, UIngrid Bergman, uLauren Bacall, USean Connery, u-Anthony Perkins okanye uJacqueline Bisset.
Akhawunti ityala eliza kuphandwa nguPoirot xa ubuyela ekhaya uvela emsebenzini oyimpumelelo. Kuya kufuneka athathe uloliwe wasentsomini ZoLwazi lwezoBomi kunye nemikhosi enkulu yekhephu yokwenza ukumisa okungalindelekanga. Ngentsasa elandelayo usozimali ufunyenwe uhlatyiwe kwaye wonke umntu omngqongileyo ubonakala enomdla wokubonisa ukuba umsulwa. Kwaye, sele sisazi ukuba yintoni isiphelo, akunjalo?
UKUFA KUMNayile (UJOHN GUILLERMIN, 1978)
Kwiminyaka emine emva koko Ukubulala kwi-Express Express Kwavela le Lumet Ukufa kumNayile. Ngeli xesha ikwangumdlali waseBritane kunye nodumileyo Peter Ustinov lowo Liquka I-Poirot. Owokuqala yayinguCharles Laughton, kodwa yayingu-Ustinov owayekwazi ukudibanisa ubuso bakhe eluntwini kunye nomcuphi othile onobuqili waseBelgium. Yenza amatyeli amathandathu.
Olu hlengahlengiso lwalune-cast egcwele iinkwenkwezi apho zazikhona UBette Davis, uMia Farrow, uDavid Niven, uAngela Lansbury, uJane Birkin, uGeorge Kennedy, uJack Warden noMaggie Smith. Kunika umdla ukuqaphela ukuba u-Ustinov wayetshate nodade ka-Angela Lansbury, umdlali weqonga obonakala kulungelelwaniso ngakumbi lomsebenzi kaChristie. Kwaye kwiminyaka embalwa kamva Lansbury yaba ophambili thotho TV odumileyo Ubhale ulwaphulo-mthetho, Olona mlinganiswa uphambili usekelwe kuMiss Marple.
Kule meko uHercule Poirot hamba ungene eKarnak, Iphenyane elibizayo eliwela umlambo umNayile. Phambi kokuba afike kwizibuko, kuya kufuneka aqale aqhaqhe iialbhis zabanye abahambi ukuze afumane umbulali. Impikiswano efanayo etshintsha kuphela useto kunye neendlela zothutho.
Ukusuka kule movie nayo Inguqulelo entsha bhanyabhanya isandula ukubhengezwa ukuthatha ithuba lokutsala kokugqibela kwe Ukubulala kwi-Express Express.
UMMANGALISO OWAPHULEYO (NGU-GUY HAMILTON, 1980)
Nanku umzekelo wokuthatha inxaxheba U-Angela Lansbury udlala u-Miss Marple. Iphinde yaphinda yaxhaswa yinkwenkwezi enomtsalane nangona sele ikukuhla kwayo, njengoko Iliwa Hudson, Elizabeth Taylor o UTony Curtis. Abasebenzi baseHollywood bafika kwidolophu ethe cwaka yamaNgesi ukuza kudubula imovie yexesha. Xa elinye lamalungu alo linetyhefu, u-Miss Marple ujongene nokuphanda ngokwenzekileyo.
UKUFA PHANSI KWELANGA (NGU-GUY HAMILTON, 1982)
UPeter Ustinov wenza indima kwakhona njengePoirot kule filimu. Ngoku isenzo sikwi ihotele eBalkan (iphinde yenziwa eMallorca). UPoirot kungekudala uza kufumanisa ukuba iindwendwe ezikhethekileyo zabelana ngentiyo enzulu ngo-Arlena, umdlali weqonga. Xa oku kubulawa, bonke babuya baba ngabarhanelwa ngezizathu zabo zokumbulala.
UQEQESHO LWE-4: 50 AM (UGEORGE POLLOCK, 1961)
Sibuyele emva ngexesha kunye nolungelelwaniso olwalungumboniso wokuqala kumlawuli UGeorge Pollock kunye nomlingisi uMargaret Rutherford. Baye bakhululwa belungisa ibali malunga noNkosazana Marple kodwa bafundisa iziseko zayo yonke eminye imisebenzi: isinxibo, uburharha kunye neentshaba kwizithunzi.
UMargaret Rutherford Ubuso obudumileyo kwifilimu ku-Miss Marple, owadlala amaxesha amane. Kweli bali kunjalo U-Miss Marple ngokwakhe, kuhambo loololiwe, ulingqina elifutshane ekubulaweni uzibophelele emotweni kaloliwe ofanayo. Kodwa akukho sidumbu kwaye abasemagunyeni baya kukholelwa ukuba kukucinga kuphela kwexhegokazi elithandayo iinoveli zabacuphi. Ke uya kuthatha isigqibo sokuphanda eyedwa.
ISISHUMI NEGRITOS (URENÉ CLAIR, 1945)
Ibhalwe ngo-1939 yayinjalo enye yezona ncwadi ziqaqambe kwaye zithengisa kakhulu Ukusuka kuChristie kwaye uhlala enye yezona zidumileyo nezaziwayo. Ikwayenye yezona zilungelelanisiweyo. Le yenye yezona zisemthethweni kwaye ikhokelwa ngamaFrentshi URené clair. Kamva kamva ngo-1987 wayenenguqulo yaseRashiya ehlonipha kakhulu inveli yokuqala.
Abantu abalishumi abangadibananga badibana kwisiqithi esingaqondakaliyo kunxweme lwesiNgesi nguMnumzana Owen othile. Lo ngumnini wendlu entle, kodwa iindwendwe zakhe azimazi. Emva kwesidlo sangokuhlwa sokuqala, kwaye bengakhange babubone umamkeli wabo okwangoku, izidlo ezilishumi batyholwa ngokurekhoda ukuba benze ulwaphulo-mthetho. Omnye nomnye, ukusukela ngalaa mzuzu ukuya phambili, babulawa ngaphandle kwesizathu okanye inkcazo.
INDIMA YOBUNGQINA (UBILLY WILDER, 1957)
Isekwe kumdlalo odlalwa nguChristie onegama elifanayo. Kwaye uBilly Wilder uphumelele ngokulungelelaniswa kwefilimu kunye nokwenza kwakhe Amandla eTyrone, uMarlene Dietrich ngakumbi uCharles Laughton, ubugcisa bobugcisa besixhenxe. Ubalisa ibali lika Uleonard vole (Amandla). UVole yindoda elungileyo nenobuhlobo, ngubani utyholwa ngokubulala inenekazi elisityebi elalimshiye njengendlalifa enkulu.
Ubungqina obunxamnye naye bucacile, kodwa eIgqwetha elidumileyo lezaphuli mthetho uSir Wilfrid Robarts (ILaughton) ukholelwa ekubeni umsulwa kwaye uyavuma ukumthethelela ngandlela yonke. UVole utshatile nomongikazi waseJamani (uDetretrich) awadibana naye ngexesha lemfazwe, kwaye uya kufumana kuye elona ngqina lichasayo kutshutshiso.
Imuvi Ufumene amagama atyunjiweyo ka-OscarEyona Bhanyabhanya, uMlawuli oBalaseleyo, ugqirha oPhambili (uCharles Laughton), oyena mlingisi uxhasayo (uElsa Lanchester), Esona Sandi siBalaseleyo, kunye noHlelo oluGqwesileyo, kodwa wasilela ukufezekisa nayiphi na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UChristie Agatha. Olwakhe uhlengahlengiso oludumileyo lwefilimu
Isishwankathelo sencwadi "uLuces de Bohemia" nguValle-Inclán